အမေစုကို ဖောင်းထုတဲ့ စတေးတပ်ကြောင့်လတ်တလောဝေဖန်မူတွေခံနေရတဲ့ ပွင့်နဒီမောင်
April 28, 2019 Cele Love 0
အမေစုကို ဖောင်းထုတဲ့ စတေးတပ်ကြောင့်လတ်တလောဝေဖန်မူတွေခံနေရတဲ့ ပွင့်နဒီမောင် အကယ်ဒမီပေးပွဲလဲ မေမေပါတယ်🧝🏿‍♀️🧝🏿‍♀️🧝🏿‍♀️ နိုင်ငံရေးလဲ မေမေပါတယ်👩🏻‍🎤👩🏻‍🎤👩🏻‍🎤 လူမှူရေး လဲ ပါပြန်တယ်…..🕵🏼‍♀️🕵🏼‍♀️🕵🏼‍♀️🕵🏼‍♀️ မေမေကအရမ်းတော်ပါတယ်👍👍👍 မေမေ ရမ်းတတ်ပါတယ် ဟိုနေရာလဲ မေမေ ပါချင်တယ် ဒီနေရာလဲမေမေ ပါပြန်တယ် နေရာတကာ ပါချင်တာလေးလျော့ပီး မီးကိစ္စလေးခေါင်းထဲထည့်ပေးပါလို့မေမေရေ အခု […]
အသတ်​ခံရတဲ့ က​လေးမသည်​ မ​နေ့က ည ၁၁ ထိ ​အကောင့်လေးသုံးသွားသေးတယ်
မင်းဖြူနှစ်​​ကောင်​​ဆေးတိုက်​ဆိုပီး သတင်းတတ်​လာ​တော့​လေ သူတို့​လေး​တွေ မဖြစ်​ပါ​စေနဲ့ဆိုပီး သိသိရက်​နဲ့ ဆု​တောင်း​နေတာ သတင်းတင်​တဲ့အမကို messenger က​နေ သူတို့ပုံပြ လှမ်း​မေး ဟုတ်​တယ်​ဆို​တော့ ကျမ​လေ စိတ်​ထဲ ဘယ်​လို မှန်း​တောင်​မသိ​တော့ဘူး။ က​လေးမ​လေးက ကျမ နဲ့ပြင်​​နေကျ ​ဖောက်​သည်​​လေးပါ။ သ​ဘောလည်း​ကောင်းပါတယ်​ သူ့​ယောက်​ကျားကလည်း ​အေး​အေး​လေးရယ်​။ မှတ်​မှတ်​ရရ ၁၁လပိုင်းကမှဘွဲယူထားတာ​လေ။ […]
အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ လက္ခဏာတွေ
အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ လက္ခဏာတွေ Comment ပေးတာက ဒီအချက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် အပျိုကြီး ဖြစ်မယ် လို့ မပြောဘူးနော် ….. ။ဒါမဲ့ အပျိုကြီး ဖြစ်နေသူ တွေကတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီ နေတာ သေချာနေပါတယ် …. ။ (1) […]
မိန်းမရပြီးရင် လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ (၉) ခု
မိန်းမရပြီးရင် လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ (၉) ခု အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့ အစိတ်အပိုင်း တခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့အခါ နေထိုင် သွားလာမှု ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွား ကြရပါတယ် …. ။ တကိုယ်တည်း ဘဝတုန်းက […]
အရမ်းလန်းတဲ့ “ဆယ်လီဆက်စီ” သီချင်း MVကို ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
အရမ်းလန်းတဲ့ “ဆယ်လီဆက်စီ” သီချင်း MVကို ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ တေးသံရှင် ကျော်ကျော်နန္ဒက သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ လူတကာနဲ့မတူတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကြောင့် လတ်တလော ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်နန္ဒက အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် မကြာခင်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ဆက်ပက်သင်္ကြန်” သီချင်းကြောင့် […]
တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် အသတ်ခံရတဲ့ မိသားစုလေး
တောင်ကြီးတွင် အသက်၇ လအရွယ်ကလေးအပါအ၀င် ၄ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ် တောင်ကြီး၊ ဧပြီ ၂၈ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် အသက် ၇ လသားအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးအပါအ၀င် မိသားစုလိုက် လေးလောင်းပြိုင် အသတ်ခံရမှု ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်…. ။ တောင်ကြီးမြို့ ကံသာရပ်ကွက် မင်္ဂလာလမ်း အမှတ် ၁၁၈ […]